Global Voices teny Malagasy » Takalon’Aina sy ny Tambiny : Politika Manao Ahoana ny An’i Frantsa ? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Mey 2013 14:58 GMT 1	 · Mpanoratra Laurent Delors Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Mainty, Frantsa, Kamerona, Nizeria, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Tokony ho telo volana taorian'ny fanapaha-kevitr'i François Hollande hampitsaharana ny fandoavana tambiny ho an'ireo mpanao takalon'aina, dia navotsotra ihany ny ankohonana Moulin-Fournier , izay niteraka sento ho an'ny fianakaviana sy ny namana. Hatramin'izao anefa dia tsy misy fampahafantarana tamin'ny fepetran'izany famotsorana izany.
Nampafantatra tamin'ny fianakavian'ny mizaka zom-pirenena frantsay rehetra manerana izao tontolo izao ny filohan'ny Repoblika Frantsay fa manomboka izao i Lafrantsa dia manaraka ny politika mandà ny fifampiraharahana misy vola amin'ireo mpaka takalon'aina . Milaza izany hoe tapitra hatreo ny fotoanan'ny fandoavan-tambiny.
Fanovana izay efa noheverina hatramin'ny fotoana nitondran'i Sarkozy satria vao maika mandranitra ny mpaka an-keriny ny fandoavana tambiny. Abdoulaye Bah sur Global Voices nanamarika tamin'ny taona 2010  [mg] fa:
Ny krizy tany Mali no nanafaingana ny fandehan-draharaha . Manomboka izao ny mpiasan'ny fitsikilovana dia tsy maintsy maka volontany ny fomba fifampiraharahany. Fanapahan-kevitra manapaka tanteraka ny teknika frantsay fanao hatramin'izao fotoana izao izany. Ny maodely anglo-saxons kokoa no noraisina.
Bernard Kouchner mampahatsiahy ny karazam-panao  amin'ny famahana ny olan'ny fakana takalon'aina:
(Lahatsarin'ny fahatongavan'ireo nalaina ankeriny taorian'ny famotsorana azy ireo, avy amin'i zoominwal )
Nanamafy ny fandikana ny fanapaha-kevitra noraisiny tsy handoa tambiny ny tao amin'ny lapam-panjakana Elysée. nampahalala ny mpikambana ao amin'ny Boko Haram, tao amin'ny lahatsary navoaka tamin'ny 25 febroary, fa maniry ny hamotsorana ireo fianakavian-dry zareo « nagadraina any Nizeria sy ao Kamerona ry zareo. Niditra nanelanelana fitondrana nizeriana. Saingy tsy nampahafantarina ny antsipirihan'ny fifampiraharahana .
Etsy ankilany kosa ry Moulin-Fournier dia mitantara fotsiny ny zava-tsarotra niainan'izy ireo tamin'ny mpampiely vaovao ao amin'ny trano fiasan'ny mpiandraikitra ny seraseran'ny krise  Vae Solis ary tsy milaza na inona na inona momba ny fepetram-pamotsorana azy ireo. Mbola baraingo tanteraka ny raharaha noho izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/05/02/48240/
 navotsotra ihany ny ankohonana Moulin-Fournier: http://www.leparisien.fr/international/la-famille-francaise-enlevee-au-cameroun-a-ete-liberee-19-04-2013-2740425.php
 Lafrantsa dia manaraka ny politika mandà ny fifampiraharahana misy vola amin'ireo mpaka takalon'aina: http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/03/18/otages-la-france-ne-veut-plus-payer_1849987_3212.html
 nanamarika tamin'ny taona 2010: https://mg.globalvoicesonline.org/2010/10/04/9587/
 Ny krizy tany Mali no nanafaingana ny fandehan-draharaha: http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/01/17/nouvelle-dimension-internationale-de-la-crise-malienne_1818135_3212.html
 Nandoa tamby tamin'ny Boko Haram ve i Lafrantsa? : http://www.slateafrique.com/171127/cameroun-nigeria-boko-haramliberation-famille-moulin-fournier-rancon
 Saingy tsy nampahafantarina ny antsipirihan'ny fifampiraharahana: http://videos.tf1.fr/jt-20h/les-zones-d-ombres-du-kidnapping-de-la-famille-moulin-fournier-7852654.html
 mpiandraikitra ny seraseran'ny krise: http://www.gestiondecrise.com/